Wednesday October 03, 2018 - 07:42:33 in Wararka by Super Admin
Xaalad deganaan ah ayaa laga dareemayaa deegaanka Goofguduud Buureey ee dhaca duleedka magaalada Baydhabo xarunta Gobolka Baay.
Wararka ka imaanaya duleedka magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay markale la wareegeen gacan ku heynta deegaanka kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyaadkii maamulka Koonfur galbeed iyo ciidamo Itoobiyaan ah oo shalay gelinkii dambe gaaray.
Wariye ku sugan gobolka Bay ayaaSomaliMeMokhadka Taleefanka ugu sheegay in xoogaga Al Shabaab ay isku fidiyeen xaafadaha deegaanka Goofguduud ayna baaritaanno ka sameeyeen saldhigyadii ay baneeyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka Koonfur galbeed.
Boqolaal qof ayaa maanta barqadii isugusoo baxay deegaanka Goofguduud waxayna dhageysanayeen Muxaadaraad ay jeedinayeen saraakiisha ciidamada Al Shabaab ee magaalada qabsaday, shalay ayay aheyd markii ay sidaan oo kale ciidamada wilaayada Islaamiga ah Bay iyo Bakool uqabsadeen deegaanka.
Goofguduud Buureey ayaa qiyaastii 30Km dhanka waqooyi uga beegan magaalada Baydhabo waxaana marta wadada isku xirta Gobollada Bay iyo Bakool, Alshabaab ayaa sanad ka hor sidaan oo kale ula wareegtay gacan ku heynta deegaanka Goofguduud Shabeeloow oo Baydhabo aan sidaas uga fogeyn.